တရုတ်တစ်ခုတည်းအဆင့်အဆုံးစုတ်ယူခြင်း centrifugal အမျိုးအစား NFPA FM မီးစုပ်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ | Tongke
Model No No XBC-ES
အဆုံးသတ်စုတ်ယူခြင်း centrifugal ပန့်များသည်ရေစုပ်စက်ထဲသို့ ၀ င်ရန်လမ်းကြောင်းယူထားသောလမ်းကြောင်းမှခေါ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ရေသည် impeller ၏ဘေးတစ်ဖက်သို့ ၀ င်ပြီးအလျားလိုက်အစုတ်စုပ်စက်များတွင်ရေသည်စုပ်စက်၏“ အဆုံး” သို့ရောက်ရှိသွားသည်။ Split casing အမျိုးအစားနှင့်မတူသည့်အချက်မှာစုပ်ယူပိုက်နှင့်မော်တာသို့မဟုတ်အင်ဂျင်အားလုံးသည်အပြိုင်ဖြစ်သည်။ စက်ခန်းအတွင်းရှိစုပ်စက်လည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်တိမ်းညွတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ရေသည်တွန်းကန်အား၏တစ်ဖက်သို့ ၀ င်လာသဖြင့်သင်သည်အင်တင်လက်၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သွယ်ဝိုက်။ မရနိုင်ပေ။ Bearing support သည် motor ကိုယ်တိုင်မှဖြစ်စေ၊ pump power frame မှဖြစ်စေဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကြီးမားသောရေစီးဆင်းမှု application များအပေါ်ဤစုပ်စက်၏အသုံးပြုမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
လူပျို စင်မြင့် pump Aအားသာချက်များ:
●တရုတ်နိုင်ငံ၏အကျော်ကြားဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော C&U bearing ။
●ဆောက်လုပ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ၄၀-၆၀% သက်သာစေမည့်အခြေခံအုတ်မြစ်လိုအပ်သည်။
♦ Pump casing - ပိုက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသည့်လိမ် spiral casing သည်အ ၀ င်နှင့်ထွက်ပေါက်အတူတူပင်။ အနားကွပ်များသည် GB4216.5 နှင့်ညီပြီး Rp1 /4or Rp 3/8 pressure testing plug နှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
♦ impeller: တံခါးပိတ် impeller၊ ၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် ၁၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ရှိရေအပူချိန်အောက်တွင်လည်ပတ်ရန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
TONGKE Pump မီးသတ်စုပ်စက်များ, စနစ်များနှင့်ထုပ်ပိုးစနစ်များ
TONGKE Fire Pump တပ်ဆင်မှုများ (UL မှအတည်ပြုပြီးပါက Follow NFPA 20 နှင့် CCCF) သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမီးဘေးကာကွယ်ရေးများကိုသာလွန်ကောင်းမွန်စေသည်။ TONGKE Pump သည်အင်ဂျင်နီယာအကူအညီမှသည်အိမ်တွင်းလုပ်ကြံခြင်းအထိလယ်ကွင်းလုပ်ငန်းအထိဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုပေးသည်။ ထုတ်ကုန်များသည်ပန့်များ၊ မောင်းနှင်မှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှုများ၊ အခြေခံပြားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ထားသည်။ pump ရွေးချယ်မှုများမှာအလျားလိုက်၊ In-line နှင့် end စုတ်ယူခြင်း centrifugal မီးပန့်များအပြင်ဒေါင်လိုက်တာဘိုင်ပန့်များပါ ၀ င်သည်။
အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်မော်ဒယ်များသည်စွမ်းဆောင်ရည် gpm 5,000 အထိပေးစွမ်းသည်။ အဆုံးစုတ်ယူခြင်းမော်ဒယ်များသည် gpm ၂၀၀၀ အထိစွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ In-line ယူနစ်သည် ၁၅၀၀ gpm ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ခေါင်းသည်ပေ ၁၀၀ မှ ၁၆၀၀ ပေအထိမီတာ ၅၀၀ အထိရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်များသို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်များဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များကိုအသုံးပြုသည်။ စံမီးသတ်ပန့်များသည်သံမဏိသံမဏိပြားများဖြစ်ပြီးကြေးဝါတပ်ဆင်ထားသည်။ TONGKE သည် NFPA 20 မှအကြံပြုသည့် fittings နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
အသုံးပြုမှုသည်သေးငယ်။ အခြေခံလျှပ်စစ်မော်တာမှဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့်ထုပ်ပိုးထားသောစနစ်များအထိကွဲပြားသည်။ စံယူနစ်များသည်ရေချိုကိုကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်၊ သို့သော်ပင်လယ်ရေနှင့်အထူးအရည်အတွက်အထူးပစ္စည်းများရရှိနိုင်သည်။
TONGKE မီးပန့်များသည်စိုက်ပျိုးရေး၊ အထွေထွေစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်သွယ်ရေး၊ စွမ်းအင်လုပ်ငန်း၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊
UL, ULC မှဖော်ပြထားသောမီးစုပ်စက်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်သင်၏စက်ရုံအားမီးထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သင်၏နောက်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်မည်သည့် ၀ ယ်ယူမည့်စနစ်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်တပ်ဆင်ထားသောသက်သေပြနိုင်သောမီးစုပ်စက်ကိုသင်လိုချင်သည်။ မီးဘေးကာကွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ် ဦး မှထုတ်လုပ်သည်။ သငျသညျအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုလယ်ကွင်း start-up ရန်လိုသည်။ သင်က TONGKE Pump ကိုလိုချင်တယ်။
Pumping Solutions ပေး TONGKE သည်သင့်ကိုပြည့်စုံစေနိုင်သည် လိုအပ်ချက်များ:
● NFPA စံချိန်စံညွှန်းများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုစွမ်းရည်
●စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အလျားလိုက်ပုံစံများ ၂၅၀၀ gpm အထိ
●စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဒေါင်လိုက်မော်ဒယ် ၅၀၀၀ gpm အထိ
●စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် In-line မော်ဒယ်များ 1500 gpm အထိ
●စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်စုတ်ယူခြင်းမော်ဒယ်များကို ၁၅၀၀ gpm အထိအဆုံးသတ်ပါ
●မောင်းနှင်မှု - လျှပ်စစ်မော်တာသို့မဟုတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်
လျှပ်စစ်မော်တာ Drive နှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင် Drive မီးပန့်များကိုမီးပွားများ၊ မောင်းနှင်မှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်စာရင်းနှင့်အတည်ပြုထားသောနှင့်စာရင်းမဝင်သောမီးသတ်လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများအတွက်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ ထုပ်ပိုးယူနစ်များနှင့်စနစ်များသည်မီးစုပ်စက်တပ်ဆင်ခကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပြီးယင်းတို့ကိုပေးသည်။
လျှပ်စစ်မော်တာ Drive ကို တစ်ခုတည်းဇာတ်စင်မီးစုပ်စက်
ဒီဇယ်အင်ဂျင် Drive တစ်ခုတည်းဇာတ်စင် မီးစုပ်စက်
အေ။ ပထမ၊ သူတို့သည်အခက်ခဲဆုံးနှင့်ခက်ခဲဆုံးသောအခြေအနေများအောက်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်မအောင်မြင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် NFPA လက်ကမ်းစာစောင် ၂၀၊ Underwriters Laboratories နှင့် Factory Mutual Research Corporation တို့၏တင်းကြပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤအချက်တစ်ခုတည်းသည် TKFLO ၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်များအတွက်ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုသင့်သည်။ မီးပန့်များသည်တိကျသောစီးဆင်းနှုန်း (GPM) နှင့်ဖိအား ၄၀ PSI နှင့်အထက်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်အထက်ဖော်ပြပါအေဂျင်စီများသည်ပန့်များသည်အနည်းဆုံး ၆၅% သောဖိအားကိုသတ်မှတ်ထားသောစီးဆင်းမှု၏ ၁၅၀% ဖြင့်ထုတ်လုပ်သင့်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင် ၁၅ ပေဓာတ်လှေကားအခြေအနေတွင်လည်ပတ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ခါးဆစ်များသည်အေဂျင်စီ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ် မူတည်၍ shut-off head, သို့မဟုတ် "churn" သည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဦး ခေါင်း၏ ၁၀၁% မှ ၁၄၀% အထိရှိရမည်။ TKFLO ၏မီးပန့်များသည်အေဂျင်စီများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှသာမီးစုပ်စက်အတွက်အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။
စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများအပြင် TKFLO မီးပန့်များအား NFPA နှင့် FM နှစ်မျိုးလုံးမှသေချာစွာစစ်ဆေးပြီး၎င်းတို့ဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ထည်သမာဓိရှိမှုသည်ပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုမရှိဘဲအမြင့်ဆုံးလည်ပတ်နေသောဖိအားထက် ၃ ဆပိုမြင့်သော hydrostatic test ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသင့်သည်။ TKFLO ၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ချက်ကို 410 နှင့် 420 မော်ဒယ်များစွာနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသည်။ သက်တမ်း၊ bolt stress၊ shaft deflection နှင့် shear stress တို့အား bearing အတွက်အင်ဂျင်နီယာတွက်ချက်မှုများကို NFPA သို့တင်ပြရမည်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်အတွက် FM နှင့် FM သည်ရှေးရိုးစွဲကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင်ကျရောက်ရမည် နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပဏာမလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မှီပြီးသောနောက်တွင် UL နှင့် FM စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုမှကိုယ်စားလှယ်များမှမျက်မြင်သက်သေဖြစ်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်စာမေးပွဲအတွက်ပန့်သည်အသင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီး FM Performance စမ်းသပ်မှုများအရအနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးအပါအ ၀ င် impeller diameter အများအပြားနှင့်ကျေနပ်လောက်အောင်ပြသရန်လိုအပ်သည်။ အကြား။
A. ပုံမှန်ခဲယဉ်းမှုကာလသည်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းမှ ၅ ပတ်မှ ၈ ပတ်အထိကြာသည်။ အသေးစိတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ။
A. အလျားလိုက်ခွဲထားသောမီးစုပ်စက်အတွက်၊ အကယ်၍ သင်သည်မီးစုပ်စက်ကိုမျက်နှာမူနေသောမော်တာပေါ်တွင်ထိုင်နေပါကစုပ်စက်သည်ညာဘက်သို့မဟုတ်နာရီစီးကြောင်းမှဤ vantage point မှစသည်မှန်သည်။ ဘယ်ဘက်ကို ဦး တည်နေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်မှာလက်ဝဲဘက်သို့မဟုတ်လက်ယာရစ်နာရီလည်ပတ်မှုအတွက်မှန်ကန်သည်။ သော့ချက်သည်ဤခေါင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးသည့်အခါအချက်ဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးပါတီများတစ် ဦး တည်းဘက်မှစုပ်စက်ထည်ကြည့်ရှုနေကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
A. TKFLO မီးပန့်များပါ ၀ င်သောမော်တာနှင့်အင်ဂျင်များကို UL, FM နှင့် NFPA 20 (2013) အရအရွယ်အစားရှိသည်။ မော်တာတံဆိပ်သတ်မှတ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုအချက် (သို့) အင်ဂျင်အရွယ်အစားထက်မကျော်လွန်ဘဲမီးစုပ်စက်၏မည်သည့်နေရာ၌မဆိုလည်ပတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မော်တာများကို nameplate စွမ်းရည်၏ ၁၅၀% မှသာအရွယ်ရှိသည်ဟုစဉ်းစားရန်လှည့်စားမထားပါနှင့်။ မီးပန့်များသည်သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်၏ ၁၅၀% ထက် ကျော်လွန်၍ ကောင်းစွာလည်ပတ်ရန်အဆန်းမဟုတ်ပါ (ဥပမာအားဖြင့်ရေအောက်ဘက်ရှိဓါတ်ငွေ့ပွင့်နေသောဓါတ်ကြိုးသို့မဟုတ်ပြိုကျနေသောပိုက်ရှိပါက) ။
အသေးစိတ်သိလိုပါက NFPA 20 (2013) အပိုဒ် ၄.၇.၆၊ UL-448 အပိုဒ် ၂၄.၈ နှင့် Split Case မီးသတ်ပန့်များအတွက်စက်ရုံအပြန်အလှန်ခွင့်ပြုချက်စံ၊ အတန်း ၁၃၁၁၊ စာပိုဒ် ၄.၁.၂ ကိုဖတ်ရှုပါ။ TKFLO မီးပန့်များပါ ၀ င်သောမော်တာနှင့်အင်ဂျင်များအားလုံး NFPA 20, UL နှင့် Factory Mutual တို့၏အရွယ်အစားအတိုင်းအတာရှိသည်။
မီးစုပ်စက်မော်တာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ရန်မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းတို့သည် ၁.၁၅ မော်တာဝန်ဆောင်မှုအချက်အလက်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူရန်အရွယ်အစားရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အိမ်သုံးရေသို့မဟုတ် HVAC စုပ်စက်အသုံးအဆောင်များနှင့်မတူဘဲမီးစုပ်စက်တစ်လုံးသည်အမြဲတစေအရွယ်အစားအားဖြင့်“ ကန့်လန့်ခြင်းမရှိသော” မျဉ်းကြောင်းသည်ဖြတ်သွားသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်မော်တာ 1.15 ဝန်ဆောင်မှုအချက်ထက်ကျော်လွန်ပါဘူးအဖြစ်, ကခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်တာတာတာ ၀ န်ရှိသည့်လျှပ်စစ်မော်တာကို သုံး၍ ပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Q. Test header တစ်ခုအားစီးဆင်းသောမီတာကွင်းဆက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
A. စံ UL Playpipe nozzles များမှတဆင့်ရေအလွန်အကျွံစီးဆင်းခြင်းသည်အဆင်မပြေသောနေရာများတွင် flow meter ကွင်းဆက်သည်လက်တွေ့ကျသည်။ သို့သော်မီးစုပ်စက်ပတ် ၀ န်းကျင်စီးဆင်းသောမီတာကွင်းဆက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုသောအခါသင်သည်စုပ်စက်များအားဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်နေလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်ကမီးစုပ်စက်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်ရေပေးဝေမှုကိုစမ်းသပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ရေပေးဝေမှုအတွက်အတားအဆီးတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်စီးဆင်းသောမီတာကွင်းဆက်ဖြင့်ထင်ရှားလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းရေပိုက်နှင့် Playpipes ပါသောမီးစုပ်စက်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်သေချာစွာဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ မီးစုပ်စက်၏ကန ဦး အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စနစ်တစ်ခုလုံး၏သမာဓိကိုသေချာစေရန်စနစ်မှတဆင့်ရေစီးဆင်းမှုကိုအမြဲတစေတောင်းဆိုသည်။
အကယ်၍ စီးဆင်းသောမီတာကွင်းဆက်ကို (ဥပမာမြေပြင်အထက်ရေတိုင်ကီကဲ့သို့) ရေပေးဝေမှုသို့ပြန်ရောက်ပါကထိုအစီအစဉ်အောက်တွင်သင်သည်မီးစုပ်စက်နှင့်ရေပေးဝေရေးနှစ်မျိုးလုံးကိုစမ်းသပ်နိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏စီးဆင်းသောမီတာကိုမှန်ကန်စွာချိန်ညှိထားကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
မီးစုပ်စက်များတွင် NPSH အတွက်ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
အေခဲ NPSH (net positive positive suction head) သည်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများအတွက်အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်ဖြစ်သည့်ဘွိုင်လာအစာသို့မဟုတ်ရေပူစုပ်စက်များ။ မီးပန့်များနှင့်အတူသင်လေထုဖိအားများအားလုံးကိုအကျိုးရှိစေသည့်ရေအေးနှင့်ဆက်ဆံသည်။ မီးပန့်များသည်ရေထုဆွဲအားမှတဆင့် pump impeller သို့ရေရောက်ရှိသည့်“ ရေစုပ်” သောနေရာတွင်လိုအပ်သည်။ သင်ကအချိန်တစ်ခုလုံးကို ၁၀၀% ပန့်ကိုသေချာစေရန်ဤအချက်ကိုလိုအပ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင်မီးရှိရင်သင့်ရဲ့စုပ်စက်လည်ပတ်နိုင်အောင်! ၎င်းသည်ခြေထောက်အဆို့ရှင်သို့မဟုတ်အချို့သောအတုအယောင်နည်းလမ်းများဖြင့်မီးစုပ်စက်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်စုပ်စက်ကိုလည်ပတ်ရန်ခေါ်သည့်အခါစနစ်တကျလည်ပတ်နိုင်မည်ဟုအာမခံနိုင်သည့် ၁၀၀% နည်းလမ်းမရှိပါ။ split-case double suction pump များတွင်စုပ်စက်၏လည်ပတ်မှုအား 3% သာကြာသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်သင်သည်မည်သည့်တပ်ဆင်မှုအတွက်မဆိုမီးစုပ်စက်အား“ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း” အာမခံချက်မရှိသောမည်သည့်တပ်ဆင်မှုအတွက်မဆိုမီးစုပ်စက်ကိုရောင်းလိုသောဆန္ဒရှိသောမီးစုပ်စက်ထုတ်လုပ်သူကိုသင်မတွေ့ပါ။
ရှေ့သို့ TWP စီးရီး Mobile Two treys ဒီဇယ်အင်ဂျင် Drive Vacuum Priming ရေနံစိမ်းစုပ်စက်
နောက်တစ်ခု: နှစ်ထပ်စုပ်ယူသည့်အမျိုးအစား NFPA UL FM မီးစုပ်စက်တစ်လုံးခွဲပါ
TKFLO ဒေါင်လိုက်တာဘိုင်မီးဘေး pump အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
pump အမျိုးအစား အဆောက်အအုံများ၊ အပင်များနှင့်ခြံဝင်းများတွင်မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်အတွက်ရေပေးဝေမှုအတွက်သင့်လျော်သောတပ်ဆင်မှုဖြင့်စုတ်ယူခြင်းဗဟိုဗဟိုချက်စက်များကိုအဆုံးသတ်ပါ။
စွမ်းရည် 2500GPM (567m3 / hr) အထိ
ဦး ခေါင်း ၃၄၀ ပေအထိ (၁၀၄ မီတာ) အထိ
ဖိအား 147 Psi အထိ (၁၀ ကီလိုဂရမ် / cm2၊ 1014 KPa)
House Power 350HP (260KW) အထိ
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း သံသွန်း, ကြေးတပ်ဆင်
ထောက်ပံ့ရေး၏အတိုင်းအတာ: အင်ဂျင် drive ကိုမီးစုပ်စက် + ထိန်းချုပ်မှု panel ကို + ဂျော်ကီစုပ်စက် လျှပ်စစ်မော်တာ drive ကိုစုပ်စက် + ထိန်းချုပ်မှု panel ကို + ဂျော်ကီစုပ်စက်
ယူနစ်အတွက်အခြားတောင်းဆိုချက်ကို ကျေးဇူးပြု၍ TKFLO အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ဒီဇယ်အင်ဂျင် Long Shaft ဒေါင်လိုက်တာဘိုင်မီးဘေး ...
နှစ်ထပ်စုပ်ယူနိုင်သောအမျိုးအစား NFPA UL FM ထည်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။